Telefonka Mobile ku waxa uu saameyn ku yeeshaa dhalmada iyo taranka ragga - Horn Future
Telefonka Mobile ku waxa uu saameyn ku yeeshaa dhalmada iyo taranka ragga
Daraasad caafimaad oo dhawaan la soo saaray ayaa waxa ay muujisay in shucaaca iyo gariirka telefoonka mobile ku uu saamayn ku yeelan karo taranka ragga, waxana uu keenaa in uu burburiyo noolaha shahwada/manida jidhkiisa ku jirta, taasoo ka hortaggta dhalmada ,yareeysana tarankiisa.
Sida laga soo xigtay daraasad ay soo saartay jaamacada “Teknion” ee kutaala Xaifa ee Isra’iil oo uu daabacay wargeyska “Daily Telegraph” ee British ka ah ayaa sheegtay in shucaaca qarsoon ee telefoonka mobile ku uu keeni karo in uu “kariyo” shaawada/manida ku jirta jidhka ninka, marka ay dhacdo in ninku uu telefoonka mobile ka uu galiyo meel aad ugu dhow jidhkiisa .
Daraasadan ayaa waxa ay sidoo kale ku waanisay ragga in telefonadooda gacanta ay gashadaan meelo kamid ah jeebadaha sare ee jidhka sare halkii kuwa hoose ee jidhka ay ku qaadan lahaayeen, si ay u noqoto in wax yar la fogeeyo shahwada si looga ilaaliyo shucaaca kasoo baxaya mobile ka.
Daraasadan ayaa lagu helay in uu jiro xidhiidh aad u dhow oo ka dhexeeya hoos u dhaca tirada taranka iyo awooda dhalamada ee ragga iyo isticmaalka badan ee telefoonada gacanta, waxana ay noqotay daraasaddani mid lagu xaliyay maramo iyo dood mudo dheer ka dhex taagnayd xarumaha cilmiga oo ku saabsanayd waxyeelada uga iman karta jidhka bini’aadanka mawjadaha telefoonka mobile ka kasoo baxaya.
Laakiin wargeyska “Daily Telegraph” oo soo xigtay cilmi baadhe ka tirsan jaamacadda “Exeter” ee Britain Dr. Fiona Mathews ayaa tidhi” kasakaw baadhitaankan cusub ee ay soo saartay jaamacadda Isra’iil ee caddeysay in shahwada ay dhaawaci karaan mawjadaha telefoonka mobile ka,laakiinse ma jirto caddayn ku filan oo ilaa iyo haatan tilmaamaysa telefonka mobile ku ama isticmaalkiisa badan iyo mawjadaha kasoo baxaya in ay u horseedi karaan ragga dhalmo la’aan.
Waxaa xusid mudan in saamaynta telefoonada mobile ka ee jidhka bini’aadamka uu caalamka maramo balaadhan ka dhaliyay ,waxa sidoo kale aad ugu mashquulsan culumada saynisyahanada, taasoo soo jiidatay cilmi baadhalayaal iyo qoraayaal badan in ay wax ka qoraan, laakiinse inta badan daraasadaha ilaa imika la sameeyay waxay isku dayayaan in ay ogaadaan mawjadaha uu soo saarayo telefonka mobile ku saameynta uu ku lee yahay gaar ahaan caruurta, halka qaar ka mid ah cilmi baadhistu ay sheegtay in saamayn nafsi ah telefoonada gacanta ay ku lee yihiin carruurta iyo dadka dhallinyarada ah.
Xigasho: Daily Telegraph
« Fariimo hanjabaad ah iyo waraaqo lagu aflagaadaynayo Islaamka iyo Muslimiinta oo loo diray tobonaan masaajiid ah oo kuyaala dalka Holland	» 113 millions de personnes entrées ou sorties de Turquie en 2015